Waa maxay ogolaanshaha sharciga? | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Sharciga Waa maxay ogolaanshaha sharciga?
The Xeerka Dembiyada Galmada ee England iyo Wales ee 2003, iyo Sharciga Dambiyada Galmoodka ee Iskodland sanadkii 2009, waxay dejiyeen waxa ogolaanshuhu ka dhigan yahay ujeeddooyinka dacwad ku qaadista sharciga dembiyada.
Sharcigu wuxuu balaariyay qeexitaanka dhaqanka ee kufsiga inuu ku daro dhammaan aqoonsiyada jinsiga oo ka dhigo dembi ah "qof" (A) inuu ku galo guskiisa xubinta taranka, laakiin sidoo kale anus ama afka qof kale (B), si ula kac ah ama aan si daacad ah lahayn, iyadoon loo ogolaan qofkaas, iyo iyada oo aan jirin wax caqli-gal ah oo ah in B uu ogolaado. "
Sida ku cad Sharciga Iskotishka, "ogolaanshaha micnaheedu waa heshiis bilaash ah."
“59. Farqada (2) (a) waxay bixineysaa in uusan jirin heshiis bilaash ah oo lagu dhaqmayo waqtiga ashtakada uusan awoodin, sababtoo ah saameynta khamriga ama walxo kale, ogolaanshaha. Saamaynta qayb-hoosaadkani ma aha inay bixiso in qofku uusan oggolaan karin waxqabadka galmada ka dib marka uu cabbo wax khamri ah ama uu qaato walax sakhraansan. Qofka waxaa laga yaabaa inuu cabo aalkolo (ama walax kale oo sakhraansan), oo xitaa wuu sakhraami karaa, isagoo aan lumin awooddii oggolaanshaha. Si kastaba ha noqotee meesha isaga ama iyadu ay sakhraansan yihiin oo ay luminayaan awood ay ku doortaan inay kaqeybqaataan waxqabad galmo, wax kasta oo galmo ah oo la sameeyo, waxay sameysaa iyada oo aan laga helin ogolaanshaha qofka cabashada qaba. ”
Waa maxay macnaha guud? Sharciga madaniga ah, marka qandaraas la sameynayo tusaale ahaan, ogolaanshuhu wuxuu ka dhigan yahay heshiis isla wax ah. Sharciga ciqaabta, waxay ka dhigan tahay wax u eg ogolaanshaha. Labada waaxood ee sharciga waxay raadinayaan in lagu daro fikradaha isticmaalka iyo ku takri-falka awoodda dhexdooda. Go'aaminta 'oggolaanshaha' waa mid ka mid ah meelaha ugu adag ee sharciga ciqaabta dembiga galmada. Waxaa jira saddex sababood oo waaweyn.
Marka hore, way adagtahay in la ogaado waxa ku socdo maskaxda qof kale. Miyuu jilicsan yahay calaamad muujinaysa in galmo galmo ay tahay hadda ama kaliya martiqaad ay ku bilaabi karto shukaansiga suurtagalnimada galmada dambe? Miyuu yahay caadiyan bulsho ama raga leh ragga si ay uga sii xoogeystaan ​​'dhiirigelinta' haweenka si ay ula galaan galmada iyo dumarku inay noqdaan kuwo u hoggaansamaya oo u hoggaansamaan? Pornography Internet ayaa si cad u dhiirrigeliya aragtida aragtida galmada.
Ta labaad, ficilada galmada waxaa badanaa lagu sameeyaa si qarsoodi ah markhaatiyaal la'aan. Taasi waxay ka dhigan tahay haddii muran ka jiro waxa dhacay, xeerbeegtida asal ahaan waxay dooran kartaa sheekada hal qof kan kale. Caadi ahaan waa inay ka gartaan caddeynta wixii dhacay dhacdadii horseedka u ahayd dhacdada sida laga yaabo inay ku jirtay maskaxda dhinacyada. Sidee u dhaqmayeen xaflad ama goob lagu caweeyo ama dabeecadda xiriirkoodii hore, haddii ay jiraan? Haddii xiriirka lagu sameeyay internetka oo keliya taas way adkaan kartaa in la caddeeyo.
Saddexaad, sababtoo ah dhibaatada ka dhalan karta weerarka galmada, xasuusiyaha cabsida xasuusta xaqiiqooyinka iyo faallooyinka ama hadalada ay sameeyeen wax yar ka dib way kala duwanaan karaan. Tani waxay ku adkeyn kartaa dadka kale inay ogaadaan waxa dhacay. Xaaladda ayaa ka dhigeysa mid kasta oo ka sii adag marka khamriga ama daroogada la isticmaalo.
Caqabada dhalinyarada qaangaarka ah ayaa ah in qeybta shucuurta maskaxda ay u dardar galiso xiisaha galmada, qatar qaadashada iyo tijaabinta, halka qeybta caqliga leh ee maskaxda ee ka caawineysa in bareegyada loo dhigo dabeecadaha halista ah uusan si buuxda u horumarin. Tani way ka sii dhib badan tahay marka khamriga ama daroogada ay ku dhex jiraan isku darka. Meesha ay suurto gal ka tahay ragga da'da yar inay raadsadaan 'ogolaansho firfircoon' xagga xiriirka galmada ayna aad uga taxaddaraan ogolaanshaha aaminaadda waxaa la siiyay markii lammaane sakhraansan yahay. Si tan loo baro carruurta, u muuji qosolkan cartoon ku saabsan ogolaanshaha koob shaah ah. Waa mid xariif ah isla markaana waxay gacan ka geysaneysaa in qodobka la dhigo.
Oggolaanshaha la fahmay waa qaab ogolaasho muran badan leh oo aan qof si cad u siinin, laakiin taa bedelkeeda laga soo qaado ficilada qofka iyo xaqiiqooyinka iyo duruufaha xaalad gaar ah (ama xaaladaha qaarkood, aamusnaanta qofka ama waxqabad la'aan). Waagii hore, lamaane is guursaday waxaa loo haystay inay bixiyeen "ogolaansho maldahan" oo ay iskula galmoodaan, caqiidada ka hor istaageysa in lagu maxkamadeeyo lamaanaha kufsiga. Caqiidadaas ayaa hadda loo arkaa inay tahay mid duugoobay waddamada badankood. Maandooriye sigaar ah ayaa si kastaba ha noqotee u horseedi kara ragga qaarkood inay galaan dherer xad dhaaf ah si ay ugu qasbaan xaasaska inay ku kacaan ficil galmo iyaga oo aan raali ka ahayn. Eeg sheekadan laga bilaabo Australia.
<< Da'da Oggolaanshaha Waa maxay Oggolaanshaha Tababar? >>